SANN MAW: Today update news for Japan Nuclear Plant
စက်ရုံတခုလုံးကို သဲတွေ၊ ကွန်ကရစ်တွေ စတာတွေနဲ့ဖို့ဖြစ်လိုက်ပီး ရေဒီရေးရှင်းအပြင် ထွက်မလာအောင် လုပ်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်လို့ တချို့ကလဲ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက တော့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ ဖြစ်လာရင် သုံးမယ့် နည်းလမ်းသာ ဖြစ်ပီး ခုချိန်ထိတော့ သုံးစရာမလို သေးပဲ ကြိုးစားနေကြတုန်းပါ။ အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
၂) သတင်းဆိုးကတော့ ဖူကူရှီးမားခရိုင် က နွားနို့် နဲ့ အီဘရကီ ခရိုင်က spinach လို့ခေါ်တဲ့ အရွက် မှာ (မြန်မာလို့တော့ ကိုယ်မသိဘူး၊ သိသူများပြောသွားကြပါ။) ရေဒီရေးရှင်း တွေ့ပါတယ် ပြောတယ်။ စားရန်သင့်တော်သောလယ်ဗယ်ထက် များနေတယ်ပြောတယ်။
၃) ၈ရက်ကြာပီးတဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှင်သူတယောက်ထပ်တွေ့တယ်ပြောတယ်။ ဝမ်းသာစရာ ပေ့ါဗျာ။
ကဲ အားလုံးသတင်းကောင်းလေးများ နားထောင်နိုင်ပါစေဗျာ။
Anonymous 19 March 2011 at 23:39
Spinish is kind of like "Bar Gyi Ywet" the vege we grow at home. But not exactly the same;alittle bit different from that. H
Anonymous 20 March 2011 at 01:38
spinach is "Hin Nu Nwe"